Raganimada wax mu dhintaa daawashada filimaanta qaawan? | Raganimo University
Raganimada wax mu dhintaa daawashada filimaanta qaawan?
February 1, 2019~1 minute
Waxaa la wada ogyahay in ragga inta badan ay daawadaan filimkaanta qaawan, inkastoo ay yartahay cid diyaar u ah in ay qirato xaqiiqadaas. Hadaba maadaama ay raggu aad u jecelyihiin daawashada filimaantaan isla markaana ay ku lumiyaan saacado badan, ma u keenaan wax dhibaato ah ragganimada mise kor ayay ku qaadaan?
Dhibaatada ugu weyn ee ay keenaan daawashada filimaanta qaawan, qaasatan dhalinyarada aan lahayn waayo aragnimada galmada ayaa ah in ay qalad ka fahmaan galmada. Waxay dhalinyaro badan xaqiiqo u qaataan filimaanta la jilay iyagoo doonaya in waxyaabaha ay ka arkeen filimaanta in ay dumarkooda ku tijaabiyaan, taasoo keenta niyad jab markii ay xaqiiqadu ka dawanaato filimaanta.
Arinta kale ayaa ah in dhalinyaradu ay shaki galiyaan xubnahooda galmada, iyagoo isla barbar dhigaya ragga filimaanta ka muuqda ee lagu bixiyay lacag iyo daawo intaba si ay sidaa u noqdaan.
Arimahaan ayaa keena in tayada galmada ragga badsada daawashada filimaanta qaawan ay hoos u dhacdo.
Waxaa sidoo kale la sheegay in daawashada badan ee filimaanta qaawan ay dhaawac u geysato indhaha.
Daawashada filimaanta qaawan ayaa sidoo kale isku badali karta baldan, taasoo noqon karta xaalada caafimaad oo la mid ah daroogada iyo qamriga. Waqti badan ayaa uga dhuma ragga balwada ay ku noqoto daawashada filimaantaan, iyagoo qaarkood ay xitaa lacag ku bixiyaan daawashada.